फागुन १२ मा ग्रोथसेलरको ‘एचआर मिट’ | गृहपृष्ठ
Home बजार फागुन १२ मा ग्रोथसेलरको ‘एचआर मिट’
माघ २३, काठमाडौं (अस)। मानव संसाधन (एचआर) विकाससम्बन्धी चौथो सम्मेलन आगामी फागुन १२ गते हुने भएको छ । मानव विकासका सम्बन्धमा कार्यरत संस्था ग्रोथ सेलर प्रालिको आयोजनामा सो सम्मेलन हुन लागेको हो । कम्पनीले आइतवार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी सम्मेलनबारे जानकारी गरायो । फागुन १२ गते हुने सो सम्मेलनमा ब्यारी मेहर एण्ड एशोसिएशन अमेरिकाका ब्यारी मेहर, भारतको मुम्बईस्थित नुगरिड कन्सल्टिङका अध्यक्ष सञ्जय मुथल र नेपालका एपेक्स कलेजका प्राचार्य एवम् धार्मिक प्रवचक एलपी भानु शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ । चौथो सम्मेलनको विषय ‘नेताहरूबाट सिकौं’ राखिएको छ । मानव संसाधन व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा बढी चुनौतीको विषय भएका कारण सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यस क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने ग्रोथ सेलरका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक मोहन ओझाले बताए ।
सो अवसरमा एपेक्स कलेजका प्राचार्य एलपी भानु शर्माले मानव संसाधन विकासमा सरकारको सिधा सक्रियता हुन नसकेको उल्लेख गरे । कुनै पनि कार्यका लागि शुरूदेखि अन्तसम्म नै मानव संसाधनको सक्रियता रहने हुनाले यसको व्यवस्थापन र विकास अपरिहार्य आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । यसको विकासमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउन नसक्नु दुःखद अवस्था भएको उनले उल्लख गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल व्यवस्थापन सङ्घ (म्यान) का अध्यक्ष जनकराज शाहले मानव संसाधन विकासका लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । दक्ष जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्य हुने तर नेपालमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रले विगत ३ वर्षेखि मानव संसाधन भेला गर्दै आएकोमा त्यसको प्रशंसा गर्दै उनले यस प्रकारको कार्यले मानव संसाधन व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्मेलनमा वर्षमा उत्कृष्ट मानव संसाधन व्यवस्थापक घोषणा गरिनेछ । कम्पनीले गत वर्षदेखि सम्मेलनको अवसर पारेर उत्कृष्ट मानव संसाधन व्यवस्थापक घोषणा गर्दै आएको छ । यसका लागि कुल २७ जना प्रतिस्पर्धीहरू छनोट भएको र तीमध्ये १ जना सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थापकको छनोट गरी पुरस्कृत गरिने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । गत वर्ष गोल्छा अर्गनाइजेशनकी मानव संसाधन व्यवस्थापक निता रानालाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।
‘टोयोटा ड्रिम कार आर्ट’का १५ जना विजेता छानिए
माघ २३, काठमाडौं (अस)। नेपालका लागि जापानी मोटर कम्पनी टोयोटा मोटर्स कर्पोरेशनको आधिकारिक विक्रेता युनाइटेड ट्रेड सिण्डिकेट प्रालिले आयोजना गरेको पाँचौं ‘टोयोटा ड्रिम कार आर्ट’ प्रतियोगिताको नतिजा आइतवार सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनीले गत नोभेम्बर १ देखि जनवरी ३१ सम्म १५ वर्षुमुनिका बालकलाकारले कोरेका चित्र सङ्कलन गरी प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । प्रतियोगितामा १ हजारभन्दा बढी चित्र प्राप्त भएको र ती मध्ये आइतवार १५ ओटा उत्कृष्ट चित्र छनोट गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यी बालकलाकारको चित्र अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि जापान पठाइने बताइएको छ ।
कम्पनीले सहभागी बालबालिकालाई तीन उमेर समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहबाट ५/५ जनालाई छनोट गरिएको बताएको छ । सो समूहमा १० वर्षभन्दा मुनिका, १० देखि १२ वर्षसम्मका र १३ देखि १५ वर्षसम्मको समूह बनाइएको थियो । ‘योर कारः द कार अफ द फयुचर’ नारासहित कम्पनीले बालबालिकालाई सपनाको कार बनाउन लगाई उनीहरूमा कारप्रतिको चाहना विकास गराउँदै आएको छ । सपना देख्न र त्यो सपना साकार हुँदाको खुसी र आनन्दलाई महसूस गराउनु समेत प्रतियोगिताको उद्देश्य रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
टोयोटा मोटर्सले यस प्रकारको कार्यक्रम नेपालसहित विश्वका ६४ मुलुकमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले स्मपूर्ण विश्वको सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी एशिया, मध्य, दक्षिण र उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्वका देशलाई समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यी मुलुकमा छनोट भएका बालबालिकाका चित्र यस वर्ष जापानमा आयोजना हुने अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा समावेश हुनेछन् । ती प्रतियोगीले कास्य, रजत र स्वर्णपदक र विशिष्टताको उपाधि पनि पाउने छन् । साथै उनीहरूलाई ड्रयागन बल एनिमी सिरिजको उत्पादक आकिरा तोरियामा र टोयोटा मोटर्स कर्पोरेशनका अध्यक्ष अकियो टोयोडाले अकिरा तोरियामा र प्रेसिडेण्ट टोयोटा पुरस्कार पनि प्रदान गर्नेछन् । नेपालबाट छनोट भएका कलाकारलाई युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट प्रालिले आइपड, प्ले स्टेसन ल्यापटप, जापानिज लञ्च तथा डिनरलगायत उपहार दिने बताएको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत ट्राफिक जनचेतना, मेहनती, गरीब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान, वातावरण सुरक्षाका विशेष कार्यक्रमलगायत कार्य गर्दै आएको छ ।
अमूलको प्रतिनिधिमण्डल चितवनमा
माघ २३, चितवन (अस) । भारतको ख्यात्रि्राप्त दुग्ध उत्पादक संस्था कैरा डिष्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ मिल्क प्रडुसर युनियन लि(अमूल इण्डिया) गुजरातको आठ सदस्यीय बोर्ड डाइरेक्टरको प्रतिनिधि टोलीले नेपालको अत्याधुनिक धूलो दूध कारखाना चितवन मिल्क लिमिटेडको आइतवार अवलोकन भ्रमण गरेको छ ।
सो प्रतिनिधि मण्डल नेपालको व्यावसायिक पशुपालन प्रणाली र दुग्धजन्य उत्पादनको अवस्थाको अवलोकन गर्न नेपाल आएको हो । प्रतिनिधि मण्डललाई चितवन मिल्क लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक राजेशबाबु श्रेष्ठले उद्योग परिसरमा स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा डिष्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ बैङ्कका अध्यक्ष धिरुभाइ अर्मसी चावडा गुजरात राज्य विधानसभाका सदस्य मानसिंह कोयाभाइ चौहानसहित अमूलका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले चितवन मिल्क लिमिटेडको कारखाना र यसमा प्रयोग गरिएको प्रविधिको अवलोकन गरेका थिए । उनीहरूले अमूल लिमिटेडको भन्दा अत्याधुनिक प्रविधिसमावेश गरेकोमा त्यसको प्रशंसा गर्दै उत्पादनले सफलता पूर्वक बजार पाउने धारणा राखेका थिए ।
सो अवसरमा भारतमा व्यावसायिक पशुपालन गुणस्तरीय दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र पशु विकाससम्बन्धी भए गरेका कार्यहरू र चितवन मिल्क लिमिटेडले नेपालमा व्यावसायिक पशुपालन पशु विकास र गुणस्तरीय उत्पादनमा खेलेको भूमिकाका बारेमा जानकारी दिइयो । चितवन मिल्क लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक राजेशबाबु श्रेष्ठले व्यावसायिक पशुपालन, गुणस्तरीय दुध उत्पादन र बजार प्रवर्द्धन गर्दै समुदायको हितमा काम गर्नेसम्बन्धी दुइ उद्योगबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
सो भ्रमण टोलीलाई पशु विकास र यसमा चितवन मिल्कले खेलेको भूमिकाका बारेमा चितवन मिल्कका सल्लाहाकार वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. तुलसीप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए । त्यसैगरी कम्पनीले गुणस्तरीय उत्पादनमा खेलेको भूमिकाका बारे कम्पनीका विषेशज्ञ डा. बीएन पटेलले जानकारी दिएका थिए ।
वेल्थ एक्सचेञ्जको तालीम
नेशनल एकेडेमी अफ कमोडिटी मार्केट प्रालिका आधिकारिक प्रतिनिधि सुबोध शर्मा सिग्देल र वेल्थ एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सनन्दन सिंहले नेशनल एकेडेमी अफ कमोडिटी मार्केट प्रालिलाई वेल्थ एक्सचेञ्जको रणनीतिक तालीम साझेदार बनाउने र वेल्थ एक्सचेञ्ज प्रमाणित तालीम दिइने विषयमा सहमति गरेका छन् । वस्तुबजारमा लगानी गर्न इच्छुकले सो तालीम लिन सक्ने बताइएको छ । वेल्थ एक्सचेञ्जले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त मेटा ट्रेडर फोर नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको बताएको छ । यस प्रकारको सफ्टवेयर नेपालमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याइएको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले नयाँ ट्रेडिङ सदस्यसमेत थप गरेको बताएको छ । सदस्यहरूलाई कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सनन्दन सिंहले एक समारोहका बीच प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।